သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ကနေဒါသို့ (အလုပ်လာလုပ်လိုသူများအတွက် - IT workers )
ကနေဒါနိုင်ငံကို တစ်နှစ်ကို လူကိုးသောင်းကျော်ဟာ ယာယီအလုပ်ပြည်ဝင်ခွင့်နဲ့ အလုပ်လာလုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ရှိပြီးသားလူတွေမှာ မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ သူတွေပါပဲ။ ကိုယ့်ကို အလုပ်ခန့်မယ့် အလုပ်ရှင်အဆင်သင့်ရှိနေပြီဆိုရင် အဲဒီကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားဟာ ဗီဇာရရန်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။
ကနေဒါမှာရှိနေတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေဟာ Human Resources and Social Development Canada (HRSDC) ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အရင်ရယူရပါတယ်။ HRSDC က ဒီလိုလုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူကို ဒီအလုပ်ရှင်က ခန့်လို့ရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်မှ ထိုအလုပ်ရှင်က ခေါ်ယူခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို labour market opinion ရယူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဥပမာ.. ကနေဒါမှာ ထရပ်ကားမောင်းသူတွေ လိုအပ်နေတယ်။ မြန်မာတွေကို ကနေဒါကို ထရပ်ကားမောင်းသူတွေ အနေနဲ့ပို့ပေးမယ်၊ ဒေါ်လာငါးထောင်ပေးရင် ရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်.. ဆိုတာတွေ ဟိုတုန်းက ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုခေတ်တော့ ရှိတော့မယ် မထင်ပါဘူး။ အဲဒါမျိုးတွေက မှန်ဖို့ရာခိုင်နှုန်း အလွန်နည်းပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကနေဒါမှာ ထရပ်ကားမောင်းတတ်သူတွေ အများကြီးရှိနေလို့ပါပဲ။ HRSDC ကလည်း ချပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ကယ်လို့ ကနေဒါမှာနေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်က မြန်မာစကားတတ်တဲ့ မြန်မာထမင်းဟင်းကိုမှ ချက်တတ်တဲ့ အလုပ်သမားမျိုး၊ ကလေးတွေကိုလည်း မြန်မာစာသင်ပေးနိုင်တဲ့ အလုပ်သမားမျိုးကို လိုချင်လို့ခန့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒါမျိုးက ယုတ္တိရှိပါတယ်။ ဥပမာ.. မြန်မာထမင်းဆိုင်ဖွင့်လို့ မြန်မာထမင်းချက်ကိုလိုချင်လို့ မြန်မာပြည်မှ ကျွမ်းကျင်သူကို လှမ်းရှာတယ်၊ ခြင်းလုံးစက်ရုံထောင်လို့ မြန်မာ့ခြင်းလုံးယက်လုပ်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားတွေကိုလှမ်းရှာတယ်၊ HRSDC ကလည်း အဲသလို မြန်မာအလုပ်ရှင်ကို eligible ဖြစ်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကမှ မှန်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများဟာ ယာယီနေခွင့်ဗီဇာကော အလုပ်ပါမစ်ပါ နှစ်ခုလုံးလိုအပ်ပါတယ်။
ကနေဒါပြင်ပမှာ ယာယီအလုပ်ဗီဇာလျှောက်လိုသူ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ အနေနဲ့က
+HRSDC မှ ဒီအလုပ်ရှင်ဟာ အလုပ်သမားငှားခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ positive labour market opinion စာ
ဒီ့အပြင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကလည်း ယာယီအလုပ်ဗီဇာရှောက်ထားသူဟာ သက်တမ်းကုန်တာနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်မှာဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်မှုရှိရပါဦးမယ်။ ကနေဒါမှာနေစဉ် မိမိကိုယ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ရန် ငွေကြေးအလုံအလောက်ရှိကြောင်းလည်း ပြရပါမယ်။ မိမိနေနေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ တရားဥပဒေကို လိုက်နာကျင့်သုံးသူဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ကြောင်းအပြင်၊ ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိပါးလာမယ့်သူ မဟုတ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သက်သေပြနိုင်ရပါမယ်။
Co-op students များ၊ အချို့သော academics များနှင့်ကျောင်းသားများ၊ ကုမဏီတစ်ခုမှ တစ်ခုပြောင်းလာသူတွေကတော့ Work permit လိုပြီး labour market opinion မလိုတတ်ကြပါဘူး။
ယာယီအလုပ်သမားအဖြစ်နဲ့ ကနေဒါကို ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့လည်း သက်တမ်းကုန်ရင် ထပ်လျှောက်လို့ရပါတယ်။ ဒီ့အပြင် permanent residence လဲ ဆက်လျှောက်လို့ ရကြပါတယ်။
ဒါကိုတော့ မြန်မာလူငယ်တွေ တော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကနေဒါကို မလာရင်တောင်မှ ဘယ်လို အိုင်တီလုပ်ငန်းများ အသုံးဝင်သလည်း အနည်းဆုံး ဗဟုသုတဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကနေဒါမှာ အောက်ဖော်ပြပါ ကျွမ်းကျင်သူတွေ တော်တော်လေး လိုအပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အလုပ်ရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်မိသည့်အခါများမှာ ကိုယ့်ကိုလည်း အလုပ်ခန့်ပေးမည့်သူ အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အဲသလိုကျွမ်းကျင်သူများကို ၀င်ခွင့်ဗီဇာ အမြန်ထုတ်ပေးလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
1.Senior Animation Effects Editor (NOC 9990.1)
Duties: Compositing and editing animation and digital effects (FX) for film and television.
1. Education: Bachelor’s degree or equivalent technical school certification in film editing or computer graphics, or equivalent work experience. (Experience must be in animation, film or digital effects — see item number3and skills/technologies list)
2. Language: Working proficiency in English or French (written and oral)
o Two years of experience with nonlinear composing and effects background with traditional on/off line an asset.
o Knowledge required and to be demonstrated in work experience asasenior editor in production.
o At least two years of experience required with any oracombination of platforms and software and hardware in the following chart.
Applicant’s experience in this field must be verified using the following table. The applicant must possess either training in, or experience working with, at least one product or technology listed under each of the two headings.
Please the rest here.
(ကနေဒါမှာ အခွန်ငွေ ၄၀% အထိပေးဆောင်ရကြောင်းကို သတိပြုစေလိုပါတယ်ရှင်)
အပေါ်က သတင်းအချက်လက်များကို http://www.cic.gc.ca/english/work/itw-jobs.asp#jobs1 မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူဝေမျှ ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
• Live–in caregivers • Business people များအနေနဲ့ ဗီဇာလျှောက်နိုင်သည့် အချက်များကို အလျှင်းသင့်သလို ဆက်ပေးပါမယ်။
♥●••.. ….••●♥ ♥●••.. ….••●♥ ♥●••.. ….••●♥ ♥●••.. ….••●♥
=( တစ်ခုမှ ဝင်လုပ်လို့မရပါလား..
Comment by ဘာညာ — November 20, 2009 @ 9:56 pm
ဟူးးးးးး လိုအပ်နေတဲ့အလုပ်တွေတဲ့ ဝေးပြီကွယ်…း)
Comment by ချစ်ငယ် — November 20, 2009 @ 10:30 pm
Comment by rose of sharon — November 21, 2009 @ 2:09 am
ကျွန်တော်ကတော့ လာပဲ..လည်ချင်တာဗျ…။ ဟိုတစ်ခါ…မလေး ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံထဲက သစ်ပင်တွေမှာ…ရေတွေအချောင်းလိုက်ခဲနေတတ်တာမျိုးတွေကို…တစ်ကယ်မြင်ဖူးချင်မိတာ….။
Comment by ဏီလင်းညို — November 22, 2009 @ 1:39 am
အစ်မရေ့ ကျနော် အဲ့မှာ ရေခဲချောင်းလာရောင်းလို့ရလား လုပ်တတ်တာက အဲ့တာပဲရှိတယ် :P
Comment by မောင်မျိုး — November 30, 2009 @ 8:26 pm
ဘာညာ… ပျောက်နေတယ်နော်ညီမ။ ဘာညာ့ကို မလေးတက်ဂ်ထားတာ ကြာလှပြီ။ ဘယ်ပိုစ်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ဟင်းးး
ချစ်ငယ်.. မရိုစ် .. ကော့မန့်ရေးပေးသွားတာကျေးဇူး။
ဏီလင်းညို.. ရေတွေအချောင်းလိုက်ခဲနေတတ်တာမျိုးတွေက လာတော့မယ် မကြာခင်။
မောင်မျိုး.. အစ်မ မေးကြည့်ပေးမယ် :D သတိရတယ် မောင်လေးရေ.. အစ်မလည်း ခုတစ်လော စာမရေးနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေလို့
Comment by မလေး — December 1, 2009 @ 6:35 pm
အ မ canada ကို တ ခြား က နေ PR direct apply လို့ ရ တယ် လို့ ကြား ဘူး လို့ပါ အဲ ဒါ လေး များ နဲနဲပြော ပြ လို့ ရ မ လား
Comment by sandi — January 12, 2010 @ 7:38 am
sandi.. http://www.ainchannmyay.com/?p=729 မှာရှိသေးတယ်ညီမ။ ဒီပိုစ်တွေကိုလည်း ကျမ ဆက်ရေးရဦးမယ် ညီမ.. အချိန်မရသေးတာလည်း ပါပါတယ်။
Comment by မလေး — January 12, 2010 @ 5:56 pm
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:37 PM